हाम्रो बारेमा - चेंng्दू डिएन फोटोइलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
DIE TECH छान्नुभएकोमा धन्यवाद! हामी पेशेवर निर्माता र क्रिस्टल-आधारित सामग्रीको आपूर्तिकर्ता हो! हामी ग्राहकको अनुरोधहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं र प्रतिक्रिया अनुसार आफैंलाई सुधार गर्छौं जसले हामीलाई सहयोगको राम्रो अनुभव ल्याउन सक्छ। डिइन टेक्नमा हामी अनुसन्धान प्रोजेक्ट्समा अवरसर्भलाई संलग्न गर्न र नयाँ टेक्नोलोजीहरूको अन्वेषण गर्न चाहन्छौं जसले हाम्रो ग्राहकहरूको साथ आवेदनको नयाँ स्तरमा पुर्‍याउँछ। । हामी जे गर्छौं त्यसबाट हामी सँधै सिक्छौं र आफैलाई राम्रो गर्न चुनौती दिन्छौं। यहाँ DIEN मा हामी खुला टोली र कडा मानकका साथ हाम्रो टोली छनौट गर्छौं, हामीसँग डाक्टरहरू छन् जसले १२ बर्ष भन्दा बढि बेरसम्म क्रिस्टल बृद्धि गरेका छन् र हामी र हाम्रा लागि आश्चर्यचकित गर्छन्। ग्राहकहरू, हामीसँग सहयोगीहरू छन् जुन सुन्न र कामबाट अध्ययन गर्नमा राम्रो छन् र ग्राहकलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि तिनीहरूको अनुभवलाई धनी बनाउन कोशिस गर्नुहोस्।
-लियोन ली CEO
थप सिक्न तयार हुनुहुन्छ? आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् नि: शुल्क उद्धरणको लागि!
एक ऊर्जावान, युवा क्रिस्टल सामग्री टेक्नोलोजी कम्पनीको रूपमा, DIEN TECH अनुसन्धान, डिजाईन, निर्माण र गैर-लाइनर अप्टिकल क्रिस्टल, लेजर क्रिस्टल, म्याग्नेटो-अप्टिक क्रिस्टल र सब्सट्रेटहरूको श्रृंखलाको बिक्रीमा विशेषज्ञता दिन्छ। उत्कृष्ट गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी तत्त्वहरू वैज्ञानिक, सौन्दर्य र औद्योगिक बजारको दायरमा जंगली रूपमा लागू गरियो। हाम्रो अत्यधिक समर्पित बिक्री र अनुभवी इञ्जिनियरि teams टोली दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छन् कि सुन्दरता र औद्योगिक दायर ग्राहकहरुका साथ विश्वव्यापी अनुसन्धान समुदाय लाई अनुकूलन अनुप्रयोगहरु लाई चुनौतीपूर्ण बनाउन को लागी काम गर्न।
अझ बढि जान्नुहोस्
उत्पादनले यूरोपियन र विश्व मापदण्डका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। हाम्रो ग्राहकहरु संग घनिष्ठ सहकार्यमा, DIEN TECH ईन्जिनियरहरुलाई सफलता खोज गर्न र नयाँ अनुप्रयोगहरु विकास गर्न सक्षम गर्दछ जुन तिनीहरूको अनुप्रयोगहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्दछ। चीनको चे Che्दूउ मुख्यालय, DIEN TECH यसको प्रतिभाशाली टोली र वितरकको साथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण एशिया सहित विश्वव्यापी ग्राहकहरु लाई विकसित गरेको छ। भविष्यको लागि, DIEN TECH ले विश्वको सबैभन्दा विश्वसनीय र योग्य फोटोइलेक्ट्रिक तत्वहरूको आपूर्तिकर्तामध्ये एकतिर आफ्नो चरण रोक्दैन।
DIEN TECH यसको उत्पादन र समाधानको विस्तृत श्रृंखलामा निर्माण गर्न समर्पित छ, यसको बिक्री पछि समर्थनको आधार र यसका ग्राहकहरूबीच कडा प्रतिष्ठा छ। र यसको पूर्ण रूपमा आफ्नो ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न साथै विश्वस्त क्रिस्टल-आधारित अप्टिकल घटक र उपकरणहरू विकास गर्न।